admin – Mandalar Hospital
Promotion for “Liver Package”
Medical History Physical Examination Fasting Blood Sugar(FBS) Lipid Profile(Fasting) Liver Function Test Total & Differential protein CA199 HBs Ag CEA Anti HBs AFP Ultrasound Abdomen
Stressless month လို့သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ November
November လဟာ Stressless month လို့ ပြောကြတယ် . သတ်မှတ်ထားကြတယ် .. ဒီလိုလမှာ Stress အကြောင်းလေး နဲနဲ ကို ပြန်လည်ဝေမျှပါရစေ .. Stress တွေများလာတဲ့ လက္ခဏာတွေက – မစားချင်မသောက်ချင်ဖြစ်လာတာ၊ ညည အိပ်မပျော်တတ်တာပါ၊ ၊ ဇက်ကြောတွေ တအားတတ်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ကျောအောင့်တာ၊ကြွက်တက်တာ၊ အရမ်းပင်ပန်းလွယ်တာ၊ စိုးရိမ်သောက များတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပြီး ဒီထက်ပိုဆိုးလာရင် မကြာခဏ ဒေါသတွေ ထွက်လာမယ်၊ ဂနာမငြိမ်တာတွေဖြစ်လာမယ်၊ နောက်ပိုင်းကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်ပြီး အစာအိမ် နာတာယောင်တာတွေဖြစ်လာမယ် ၊ သွေးပေါင်တက်တာ၊ ဆီးခဏခဏ သွားတာတွေထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် (ဒီအဆင့်ကတော့ Stress အတိုင်းအတာတော်တော်မြင့်လာတယ်လို့ပြောရပါမယ်) Stress တွေကြုံလာတဲ့အခါ ✔ အသက်ကို ဝဝ ရှုပါ၊ ✔ လေ့ကျင့်ခန်း…